Coulda ငါ့ကို Lyrics ရောက်ဖူး — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
Coulda ငါ့ကို Lyrics ရောက်ဖူး
နောက်ထပ်အသံအားဖြင့်: J ကို. ပေါလုက
ရောနှောထားသောကကျွမ်းကျင်: ယာကုပ်အမျိုးကို “စီးပွားရေးဆိုင်ရာ” မောရစ်
ဒါကြောင့် coulda ငါ့ကိုဖြစ်တူငါခံစားရတဲ့အခါဒါကြောင့်ကိုမှန်ကန်င်
ဒါကြောင့် coulda ငါ့ကိုဖြစ်တူငါခံစားမိ
သို့သော်ထိုသို့ coulda ငါ့ကိုဖြစ်
ငါက Mike Brown ကမသိခဲ့ပါ
ငါ Trayvon သိသည်မဟုတ်
ငါ Sean ဘဲလ်မသိခဲ့ပါ
ငါအော်စကာ Grant ကသို့မဟုတ် Tamir ဆန်စပါးသိသည်မဟုတ်
ငါရှည်လျားသောစာရင်းတယ်ကိုမုန်း, သငျသညျအကြှနျုပျကိုဆူညံအော်ဟစ် finna မြင်
ကိုယ်တော်နှင့်တူအုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်, သူတို့ကျနော်တို့ငတ်မွတ်သောသူတို့ကို fiends ထင်
ငါခံစားမိသောအခါ coulda ငါ့ကိုဖြစ်တူကလည်းအမှန်တကယ်ဖွင့်
ငါသိမြင်သောအခါ, store မှာအချိုရည်ထုတ်ကောက်နေ
ငါတစ် BlackBerry ဖြင့်သင်တို့ကိုရိုက်ကူးနိုင်ကြောင်းသိသည်မဟုတ်
ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြည့်ဝ၏, ရှေးရှေးအပြည့်အဝအခန်းတခန်းသည်အ finna ရက်ပ်
ငါ့လက်ကိုလက်ထိတ်ခတ်, ခါးမှာဆင်း Pat
ဒါဟာတူညီတဲ့ ol င်, တူညီတဲ့ ol
သင်တစ်ဦး pump နှင့်အတူငွေရှာပေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအရေးမပါဘူး
သူ Mike ဘရောင်းသည်မိမိလက်ကိုတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါမသိရပါဘူးကွညျ့ရှု
သို့သော်လည်းငါသည် I'ma ထရပ်ကားဟု homie ရေးသားတာပါ
ထိုအ I'ma ငါသည်ဤလမ်းမ၌ကြည့်ရှုခံစားရသငျသညျပွောဆို
ထိုသို့ coulda ငါ့ကိုဖြစ်တူငါခံစားမိသောအခါစစ်မှန်သောရဲ့ပွောဆို
မီးခိုးရောင် feeling မိုဃ်းတိမ်, အနီရောင်မျက်လုံး
Black နဲ့အဖြူတိုက်ပွဲဖြစ်, ဦးခေါင်းကိုကျော်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး
မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေ Fighting, ကောင်းသောမှတ်တိုင်များအောင်
ကျနော်တို့ရုံအနိုင်ရမနိုင်လို feeling င်သိ
ဖေါ်ပြ: Coulda ငါ့ကိုရောက်ဖူး — ခရီးစဉ်လီ
ယော်ဒန်မြစ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသီချင်းစာသားထဲမှာလုပ်အချက်များအချို့ကိုတွေ့မြင်, ငါသည်ဤသီချင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးသိ, ဒီပရမ်းပတာအတွက်ပေးခြင်းရဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့နဲ့တူပေမယ့်ခံစား.
အဆိုပါ 3rd ကျမ်းပိုဒ်၏ဒုတိယအပိုင်း, သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချ patted ခံအကြောင်းပြောနေတာ “ကိုက်ညီတဲ့” ပြစ်မှုဆိုင်ရာများ၏ဖော်ပြချက်. ကျွန်မရှေ့မှာ patted ခဲ့တာ, အဘို့အ tailed ခံရပြီးနောက်နေရသူများ၏ဘေးထွက်အပေါ်3မိုင်, ငါမြို့များ၏ခိုင်ခံ့ဘက်မှခဲ့ကဲ့သို့ငါ့ကိုကြည့်ရှုဖွဲ့သော beanie နှင့်ချွေးထွက်ဝတ်ဆင်သောကွောငျ့. မရင့်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်ငါခရီးသည်ထိုင်ခုံ၌ငါ့အဖေနှင့်အတူ Impala ့အဘိုးမောင်းခဲ့သည်, သူတို့ငါသည်ငါ့ Macbook fixed ခံရဖို့ကိုချွတ်ကျဆင်းသွားရှိရာဒေသခံက Apple စတိုးကနေပြန်ဦးတည်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်များ check လုပ်ထား. ကိုက Call, ဘာပဲခေါ်, ဒါပေမယ့်ဘာမှသော်လည်းငါ့အရေပြားအရောင်ခဲ့သည်. တစ်ခုမှာအရာရှိအဖြူခဲ့သည်, အခြားအနက်ရောင်ခဲ့သည်. ဒါကငါ့ကိုခဲ့သည်.
ပထမဦးဆုံးကျမ်းပိုဒ်၏ပထမဦးဆုံးလိုင်း: “ဘယ်သူမှဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်မှုနားထောငျတျောမမူပါနှင့်”. တော်တော်လေးသေချာငါကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုသိ. စကားလုံး “ကျွန်တော်တို့၏” ကြောင်းထားသောစာပိုဒ်တိုများအတွက်, ငါ့ထံသို့သီချင်းကနေကှာကဲ့သို့ခံစားရ, ငါရုန်းကန်သောအရာကိုနားလည်မည်မဟုတ်တူသော, သို့မဟုတ်သင်ခံစားရပုံကို. ငါနားလည်ပေးနိုင်မကျမည်အကြောင်း, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ထောက်ခံမှုမှငါ့ကိုနည်းလမ်းပေးကြ၏, ဆုတောင်းချက်မှတဆင့်.
ကြောင်းအတွေးပေါ်ဆက်လက်, “ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်သိဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ဖန်ဆင်း”. သီချင်းဖို့တပြင်လုံးကိုတန်ပြန်ရှိပါတယ်. ဘုရားသခင်သည်သူ၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီငါတို့ကိုဖန်ဆင်း, နှင့်မျှမတို့အရောင်, မသန်စွမ်း, နိုင်ငံရဲ့ကျားသို့မဟုတ်ဇာစ်မြစ်အစဉ်အဆက်မဆိုတစ်ဦးချင်းစီကိုသူဘုရားသခင်ကိုအကြည့်ချင်းမတူကြမဆိုဖန်တီးဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ပါတယ်? အဘယ်ကြောင့်ငါမဆိုကွဲပြားခြားနားသည်သင်တို့ထံကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြည့်အရှုသင့်ပါတယ်, နှင့်အပြန်အလှန်?
ငါနောက်ထပ်မရနိုင်တော့, ဒါပေမယ့်ငါမလုံလောကျကဆိုပါတယ်င့်ခံစားရသည်. ခရီးစဉ်ကို, ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်တစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုဝတ်ဆင်, ကျမတို့ကလည်းဘယ်ကွဲပြားခြားနားမဆိုလူတစ်ဦးကိုကြည့်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသူတို့ကိုပြုမူဆက်ဆံကြဘူး. ကျနော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပစ်, နှင့်အာရုံနှင့်ကိုယ်တော်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုထား, နှင့်မသက်ဆိုင်ကိုတစုံတယောက်သောသူသည်ခံစားရမည်သို့, ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်များဖြစ်ကြလို့ပြောလာသောအခါ, ကျွန်တော်ပြုမူလမ်းကိုကျနော်တို့ကလူကိုအမှတဆင့်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရပုံကိုရောင်ပြန်ဟပ်လို့ပြောမှုအရာတို့ကို. ဒါကြောင့်သင်ရောက်ခဲ့ကြပါပြီနိုင်လျှင်, ငါမဆိုကွဲပြားခြားနားသငျသညျကိုကြည့်သင့်ပါတယ်? ငါ့ကိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကို?
အကြှနျုပျ၏အချက်ဖြစ်ပါသည်, အ “အရောင်မခွဲခြားနိုင်ဖြစ်နေသော” ဒီလောကအတွင်း.
Tory • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစ်ကိုယော်ဒန်မြစ်, ကိုယ့်ကြောင့်ဖျောပွနိုငျ “colorblindness” ဤအကိစ္စများမှအဖြေမဟုတ်ပါဘူး? ငါ့ကိုကျားမှပြိုင်ပွဲကနေအလျင်အမြန်ကူးအပြောင်းကြစို့. ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြသည်, နှင့်ကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်ပါသည်! ဖြစ် “ကျား, မကျြစိကနျး” အလွန်ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်, ကသဘာဝကျကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု၏အရေးပါမှုကိုပယ်ဖြတ်လို့, ငါတို့ကိုဘုရားသခင့ပေါ်ထွက်လက်လွတ်လုပ်. အဘယ်သို့ငါ၌ဆိုလိုယောက်ျားအဖြစ်ကြောင့်, သနားခြင်းကရုဏာအမြိုးသမီးမြားအဘို့အအဖြစ်သဘာဝကျကျမအဖြစ်မလာလေ့ရှိတယ် (အသိပေးစာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလေ့!). သာယောက်ျားကြည့်ရှုပါလျှင်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်အပေါ်ထွက်လက်လွတ်မယ်လို့. ကျနော်တို့ကအကြောင်းဖတ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမမြင်သာထင်သာတွေ့မြင်, ကရုဏာတော်လူ့ဥပမာ (ငါရယ်ငါရန်လိုယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောတာကိုသိရ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုသာအမှတ်ရစေ).
ပြိုင်ပွဲတူညီတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ကတကယ်တော့အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြသည်, သဘာဝကျကျ! လူမည်း, အာရှသား, အဖြူ, အစွမ်းကုန်, ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းအတွက်များသောအားဖြင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားကြသည်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ယဉျကြေးမှု, စသည်တို့ကို. ဤသည်လှပသောအရာဖြစ်ပါသည်. တယောက်ကိုတယောက်ယဉ်ကျေးမှုစိတ်အားထက်သန်မှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏တစ်ဦးအသည်းအသန်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည် (ညာဘက်အမှုအရာအကြောင်းကိုအသည်းအသန်). တဦးတည်းယဉ်ကျေးမှုရဲ့မှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့် “စိတ်ရှည်(သမီး),” ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသည်းခံခြင်းကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်, နှင့်စိတ်ရှည်. ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်, ကျနော်တို့ကတကယ်တော့ဘုရားသခင်၏အများအပြားဓါတ်ပုံတွေကိုတွေ့မြင်ရ.
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမပါဘဲ, ငါတို့ရှိသမျှသည်အတူတူပင်ကုသခံရဖို့ရှိပါတယ်, ငါတို့ရှိသမျှသည် Imago Dei ဖန်တီးကြောင့်. သို့သော်, ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့များမှာ, နှင့်အဆင်ပြေရဲ့! ငါတစ်ဝက်အနက်ရောင်ပေါ့, ဝက်အဖြူ, နှင့်တစ်တစ်တန်ရှိ “အနက်ရောင်စရိုက်များ,” နှင့် “အဖြူစရိုက်များ။” အိုကေ. ကောင်းလိုက်တာ! မျှော်လင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အကြောင်းတစ်ခုခုပြသ! ငါကွဲပြားခြားနားမှု၏အခမ်းအနားနှင့်သင်ယူမှုအဘို့အမဲထက် colorblindness, နှင့်စစ်မှန်သောအခမ်းအနားဧဝံဂေလိတရားကိုသာဖွစျနိုငျ.
Nate • ဒီဇင်ဘာလ 6, 2014 တွင် 2:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်၏စကားသည်သင်၏စကားတစ်မူကွဲသုံးပြီးသီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးသားဖို့ငါ့ကိုမှုတ်သွင်းကြ: “ငါတို့ရှိသမျှသည် Imago Dei ဖန်တီးနေကြတယ်, သို့သော်, ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့ဖြစ်ကြပြီးပို OK ကိုထက်ရဲ့”. ဟော ပြော. နှင့်မီးပွားဉာဏ်ပညာကိုရန်သင့်ပဏာမခြေလှမ်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. သီချင်း၏ကျန်မတူကွဲပြားမှုနှင့်ခရစျတျော၌အကြှနျုပျတို့၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖော်ပြမှစကားများသက်သက်သာတစ်ခုမဟာလက်ဆောင်အဖြစ်သူ့ဟာသူသက်သေပြဖို့ထွက်လှည့်ထားသည်.
Nate • ဒီဇင်ဘာလ 6, 2014 တွင် 2:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
စိတ်မကောင်းပါဘူး….*Tory *….မဟုတ် Tori.
Tevn • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီဂျော်ဒန်ကပြောပါတယ်. ငါသည်ဤတစျခုအရာလို့ပြောပါလိမ့်မယ်: အဲဒီအစား colorblind ဖြစ်ခြင်း၏, ကျနော်တို့အစားညျဘုရားသခငျ၏ဖန်တီးမှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုနောက်ခံတွေ့မြင်နိုင်? ကျနော်တို့ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်အောက်တွင်ကိုယ်တော်နှင့်အတူရပ်. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းဖြစ်ပါသည် – ကျွန်တော်ဖာဂူဆန်ထံမှဆိုရင်ဘယ်သူမျှအရေး, Cali, အော်ရီဂွန်, Alabama သို့မဟုတ်နယူးယောက်. ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ focal point တစ်ခု. ထိုအထဲသို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားရန်လိုလားတဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌ “လူနည်းစု” နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ရပ်တည်, ကိုယ်တော်ကိုအောက်.
ယောရှု • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2015 တွင် 1:09 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်, ဤအတှေးအဘို့အကျေးဇူးတင်စကား. ငါသည်သင်တို့၏ဧဝံဂေလိတရား၏မှန်ဘီလူးမှတဆင့်သည်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှု၏ဝမ်းနည်းဖွယ်ပြည်နယ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်သူကိုအရောင်တစ်သောသူကဲ့သို့သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေတန်ဖိုးထား. ထာဝရဘုရားသည်သင်၏အလုပ်ကတဆင့်တျော၏နိုငျငံတျောနဲ့ကျော်ကြားမှုကိုတည်ဆောက်ရန်ဆက်လက်နိုင်ပါစေ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဂါဗြေလ • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 2:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျခရီးစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင်တစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုနေ. ကောင်းမွန်သောအလုပ်တက်အောင်ထားပါနှင့်အရှင်၏လမ်းညွှန်ချက်အပေါ်အမှီ.
မိုက်ကယ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 5:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာယခုသွားအပေါငျးတို့သဖြစ်ရပ်များကိုဖတ်ရှု saddening ရဲ့. နယူးယောက်ကနေကင်ညာမှလက်ျာဘက်. Painfull ကိစ္စများသေးကျနော်တို့သူတို့ထံမှသင်ယူနှင့်အတူတူပင်အမှုအရာလုပ်နေတာစောင့်ရှောက်ကြပါဘူး. ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေကိုအစောင့်အထိန်းဖြစ်လာခဲ့သည်ဒါဟာအချိန်
မိုက်ကယ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 6:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ် Lee က, ဒီမတူညီတဲ့အချိန်ကရောက်လာခဲ့ကြပါဘူး. ကျနော်တို့ကပိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွအားဖွငျ့အမှတ်အလေးပေးရန်လိုအပ်ပါတယ် #couldabeenme
Cristella • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 6:05 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင် blog post: နှင့်သားအဘို့ခရီးစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်
ရစ်ချက် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 7:37 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြားဖို့ကယ့်ကိုဝမ်းနည်း, နေဆဲတကယ် y'all ခံစားရပုံကိုစိတ်ကူးပေမယ့်အနက်ရောင် ppl တွေအများကြီးပဲအစာရှောင်ဖို့ပဲတကယ်ရမမြင်နိုင်… ဦးအယ်လ်များအတွက်ဝမ်းနည်းခံစားရ, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောမှာအာဏာမဲ့ခံစားရတယ်…
ရစ်ချက် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 7:38 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
*ရုံ = တရားသူကြီးတွေ
Todd • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 7:48 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစွမ်းထက်ကြေညာချက်, လှလှပပထွင်းထု. ငါအနည်းဆုံးကမျှော်လင့်ထားကြသောအခါငါ့မျက်မှောက်မှယူဆောင်နှစ်ပေါင်း. ငါသာမကြာသေးမီကသင့်ရဲ့ဂီတကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဘုရားသခငျသညျဒါကြောင့်ယူဆငါ့အသက်ကိုအတွက်အချိန်မှာအံ့သြဖွယ်တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုခဲ့. သငျသညျမြားစှာခြီးမှမျးခွငျး, ညီလေး.
လူးဝစ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:09 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကိရှ • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီသီချင်းကိုကြိုက်တယ်! ငါမြော်လင့်သူ့ကိုအရမ်း၌တည်ရှိ၏!! အကူအညီကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်!!!
ဖေါ်ပြ: နယူးဂီတ: ခရီးစဉ် Lee က – “Coulda ငါ့ကိုရောက်ဖူး” |
ရောဘတ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 9:42 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Trust မှဘုရားသခင်နှင့်ကောင်းမွန်သောခရီးစဉ်ပွုလုပျခွငျးကိုသိမ်းဆည်းထားပါ! သင်တို့အလင်းကိုလင်းစို့.
မန် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:51 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘုရားသခင့အရောင်မမြင်ရပါဘူးဟုကျမ်းစာနှင့်မညီဖြစ်ပါသည်. (ယော်ဒန်မြစ်) ကမျြးစာကဘုရားသခင်သည်သူ၏တန်ခိုးအာနုဘော်ပြမှကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်လျှာ created ကပြောပါတယ်. ကျနော်တို့ကမတည်ရှိပါဘူးဟန်ဆောင်မနေသင့်! သင်ပြုသောပဌနာသဖြင့်ဤအမှုအရာတို့ကိုအတူဆကျဆံသို့မဟုတ်သမျှ Avenue ထို့နောက်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်သူ့ရဲ့သီချင်းငြင်းခုန်ဖို့ကြိုးစားနေကြသူတစ်ဦးယုံကြည်သူအဘို့အရှိချင်သည်ဟုဆိုပြန်လျှင်? သူကသူ့နာကျင်ဝေမျှနေသည်. မိမိအနာကျင်မှု. ပစ္စည်းပစ္စယအနက်ရောင်လူ, ဖြတ်သန်းသွား. သငျသညျသူ့ကိုဟုများအတွက်စိမ်းကားခံစားရဖို့ရှိသည်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်. အဘယ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အတှေ့အကွုံသင့်ရဲ့ ONE သာဓကများစွာကိုအနက်ရောင်လူတွေနေ့စဉ်မျက်နှာရန်ရှိသည်သောနာကျင်နှင့်စိတ်ပျက်ထွက်မအုပ်စိုးသို့မဟုတ် invalidate ဖို့ရှိသည်ပါဘူး. မရင့်တစ်ခုအချိန်. ကျွန်မခင်ပွန်းကအမြဲသေချာသူမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုခြိမ်းခြောက်အဖြစ်ကိုချွတ်လာစေရန်အထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးသွားကြဖို့ရှိပါတယ်!! အဘယ်ကြောင့်? သူကကြောက်စရာထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့သူအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်ကြောင့်သူကလူသူတို့ကမှတ်ချက်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်ခံစားရကြောင်းပီသသောပြောသွားခြင်းဖြစ်သည်, wow သငျသညျငါမျှော်လင့်ထားသည့်အဘယ်အရာကိုမဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်သင်ကတခြားအနက်ရောင်ကလူနဲ့တူမဟုတျပါ. ကလူကိုသင်တက်ပါနဲ့သူတို့သညျပွောဆိုလမ်းဖြင့်အံ့အားသင့်နေကြသည်? တစ်မိခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကြားကလူထွက်ဘို့ stop, သငျသညျသဘောတူသို့မဟုတ်နားလည်ရန်မလိုပါ. ကိုယ့်အဖြေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်အချို့သောစာနာခြင်းနှင့်အကူအညီကိုပြသ! သင်၏နှလုံးခရီးစဉ် Lee ကမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
အဘိဂဲလ • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 1:28 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လိမ့်မည် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 2:44 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကောင်းမွန်သောအလုပ်ခရီးစဉ်တက်အောင်ထားပါ! သင်၏စကားနှင့်သင့်သကျသခေံအစွမ်းထက်များမှာ! ထာဝရဘုရားသည်သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်း, သငျသညျစောငျ့ရှောကျ, သင်တို့အပေါ်သို့သူ၏မျက်နှာကိုထွန်းလင်းစေ!
Tyrone • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 3:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Charlotte • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ် Lee ကလူကို,
ငါသည်သင်တို့၏အသံအဓိကစစ်မှန်ကိုချစ်ရန်စိုက်ပျိုးကြပြီလုပ်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ပြည်နယ်?! Ahh ဒါကုန်ကြမ်းများနှင့်အမှန်တကယ်ဖွင့်! ဤအရာသည်အလွန် feat ဖြစ်ပါသည်. bro. အလွန်စစ်မှန်တဲ့, အရမ်းလေထုအပေါ်ဒီမှာပြထားပြီဖြစ်သောအတွင်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအားလုံးကြားဖို့ဝမ်းနည်းကြောင့်ဒီလောကကဆင်းဘက်လိုက်မှုနှင့်ထောက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအရူးဖြစ်ပါတယ်နေပါတယ် – အရမ်းအပျေါမှာ stereotyped နှင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့်အတွက်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပြိုင်ပွဲအတွက်စိတ်ပျက်တာ. ဘရွတ်ကလင်းနယူးယော့ကနေဒီဗီဒီယိုငါရှည်သောကာလ၌မြင်ရပါတယ်အရှိဆုံး saddening အရာတစျခုဖွစျသညျ.
ဗစ်တိုးရီးယား • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:28 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ယော်ဒန်မြစ်ဟုဘာမေတ္တာ. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အနက်ရောင်အမေရိကတိုက်ဖြစ်ကြောင်းကို, မိန်းမတစ်ယောက်, ဒါပေမဲ့ကျနော့်အမြင်အတွက်, ကျား, မတစ်ဦးကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှမပါ, အနက်ရောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုလည်းခွဲခြားဆက်ဆံနည်းလမ်းပစ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်. ငါသည်ငါ့အသားအရေရဲ့အရောင်အဘို့အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပစ်မှတ်ထားခဲ့ဖူးဘူး, ဒါပေမယ့်ငါငါ့ကိုထိခိုက်စေသို့မဟုတျကြှနျုပျတို့အကြောင်းပြောနေတာနေသောသူမြားကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုး၌ငါ့ကိုသတ်အံ့သောငှါသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုမှမကောင်းတဲ့အမှုအရာကိုမုန်းသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိဘယ်တော့မှချင်ပါတယ်ထင်လို. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း, ငါအဆက်မပြတ်ယရှေုသညျအခွားသောပါးကိုဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည်ရှိရာကျမ်းပိုဒ်၏သတိပေးတာပါ. တစ်စုံတစ်ဦးကသငျသညျကိုမုန်းလျှင်, သင်သည်ထိုကြားမှသူတို့ကိုမချစ်. လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဖြစ်ပျက်ကိုရပ်တန့်ဘယ်တော့မှဦးမည်, ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်တိုက်ဖျက်လျှင်, အခြားပါးကိုဖွင့်. သငျသညျမညျသူမဆိုသင်တို့လက်ခံအောင်မနိုင်, ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းပစ္စယရပ်တန့်သွားသည်မဟုတ်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လူမည်းပစ်မှတ်ထားတစ်ခုတည်းသောပြိုင်ပွဲဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားရပ်တန့်ရန်မလိုအပ်. တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်သည်, အနက်ရောင်ရာဇဝတ်မှုအပေါ်အဖြူသတင်းအတွက်ဆောင်ခဲ့ခံရသည့်တစ်ခုတည်းသောရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်. တစ်ဦးဟစ်စပန်းနစ်ဦးသေဆုံးပြီးအဖြူရောင်ကောင်လေးအကြောင်းကိုအဘယျသို့? ဒါမှမဟုတ်အာရှသတ်ဖြတ်နေတဲ့အနက်ရောင်? ငါတို့ရှိသမျှသည်အညီအမျှဖန်တီးနေကြတယ်. ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်စနစ်အားလုံးအနက်ရောင်ကလူကိုသိရှိသောအခါအချိန်ရှိ၏, ဒါပေမယ့်ယနေ့တိုင်းပြိုင်ပွဲတို့တွင်အကျွန်ပြုမှုနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဖွင့်. ဘုရားသခငျသညျမဆိုကွဲပြားခြားနားသူအခြားမည်သူမဆို၏အသေခံခြင်းကိုမြင်သည်ထက်, ဤအနက်ရောင်ယောက်ျား၏သေဆုံးမှုကိုမမွငျပါဘူး. ကျနော်တို့ကြောင်းအယူအဆမေ့နေကြတယ်ထင်, အဘယ်သူမျှမလူတစ်ဦးရဲ့ဘဝသည်အခြားထက်ပိုမိုအရေးပါ. ထိုအဖွင့်လည်းငါတို့တကယ်ကဤပြစ်မှုများ၏အတိအကျအချက်အလက်တွေမသိရမေ့လျော့တော်မပါစေ. ခရီးစဉ်ကို, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောမှာသင့်ရဲ့သီချင်းအပေါ်မုန်းဘူး, သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိတယ်လို့ကြီးမြတ်ရဲ့နဲ့ဒီဥစ္စာ. ပေမဲ့, ငါပြောမယ်, ဟုတ်တယ်သူကသင်ရောက်ခဲ့ဖူးနိုင်, ဒါပေမယ့်လည်းအဖြူရောင်လူကိုရောက်ခဲ့ဖူးနိုင်. ကျွန်တော်တို့ကိုအနက်ရောင်ကလူတစ်ခုတည်းသောပစ်မှတ်မဟုတ်. တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုမြင်လမ်းကိုကြည့်ဖို့ပါစေရဲ့ပါ, 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုတန်းတူ.
ဒန်ယဲလ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တစ်ဦး biracial အဖြစ်, အရောင်မခွဲခြားနိုင်ဖြစ်နေသော(ဟုတ်ကဲ့, ငါ၏အမွေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ကြိမ်အာရုံစိုက်စတင်ရန်လည်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးတို့ပါဝင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. သူတို့ကိုငါအဘယ်သူမျှလျော့နည်းဆင်နွှဲ) အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျွန်မအနက်ရောင်လူကိုတဆင့်သွားကြောင်းဘာမှစိတ်ကူးမနိုင်. လူတွေကိုမျိုးနွယ်အပေါ်ဖြောင့်ခုန်ခြင်းနှင့်ကထဲကဘုရားသခငျသညျစှနျ့ခှာအထူးသဖြင့်လာသောအခါ. သို့သော်လည်းငါသည်သူပိုင်ဆိုင်ဘယ်မှာသင်၌ဘုရားသခင်သွင်းထားကြောင်းဝမ်းသာတယ်. သူကဒီအခြေအနေကိုအတွက်ပိုင်ဆိုင်, သူဟာတရားမ္တွလှူအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်. ကျနော်တို့ပိုင်နှင့်ကိုယ်တော်၌ယုံကြည်ကိုးစား.
ရိုင်ယန် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:49 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အန်သိုနီ • ဒီဇင်ဘာလ 7, 2014 တွင် 10:20 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မနေ့ကငါကသူတို့ညီအစ်ကို, ညီအစ်မအော်ဟစ်သောစကားကိုနားထောင်ဖို့ကြိုးစားနေလူများ၏အပြည့်အဝအခန်းတခန်းအဘို့ဤသီချင်းကစား. အဲဒီမှာအကြောင်းကိုခဲ့ကြသည် 18 ကျွန်တော်တို့နှင့် 6/8 အဖြူခဲ့ကြသည်. သင်၏စကားသည်အမှုအရာခိုင်မြဲ.
သင်၏စကားနက်ရှိုင်းရှိလူများရောက်ရှိနေကြပါတယ်သင်သိရ, လှပသောနည်းလမ်းများ. သင့်ရဲ့ရိုးသားတဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
ဂျော်နီ • သြဂုတ်လ 13, 2015 တွင် 7:36 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုဒီလုပ်နေပါတယ်လျှင်ကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဘာမျှရှိပါတယ်. အဆိုပါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပြဿနာအဘယ်သူမျှမသူတို့ညံ့ဖျင်းအဖြူကုသနေကြသည်ဘယ်လိုငိုကြွေးအော်ဟစ်မှသာသံသရာပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆန္ဒရှိသောကြောင့်ထိုသို့မလမ်းကိုဆက်ပြီးအဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့သီချင်းသာပြပွဲ, မက္ကဆီကန်, အာရှ, လူတွေပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြင့်တူညီသောနည်းလမ်းအားလုံးအချိန်ကိုအသေခံခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးကာကွယ်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ကြသူတစ်ဦးဦးအားဖြင့်ရပ်တန့်ခံရခြင်း. သင့်ရဲ့လုံးဝတရားမျှတမှုသို့မဟုတ်သင်အဘယ်သူမျှမချောလိုင်းများသို့မဟုတ်ဆင်ခြေလည်းမရှိမဟုတ်ဖြစ်စေ. သငျသညျစိုးရိမ်မှုတွေနှင့်အမျက်ဒေါသဆောင်ခဲ့, မပေးသငျသညျဖွစျဖို့ရှေးခယျြသေးသူတွေကိုအတွက်တပါးသောဘုရား. သငျသညျခရစ်ယာန်တွေကိုသင့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီချင်းစာသားကသင်၏ဂုဏ်နဘုရားသခင်သည်သင်၏လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့် ပတ်သက်. TIS သီချင်းလုပ်မယ့်ကြောင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများအတွက်ထရပ်များနှင့်မဆိုအစားဘုရားသခင်အဘို့, လက်ျာရပ်တည်ချက်အောင်မဟုတ်ဘဲပြီးနောက်သင်နားထောင်ရင်းစောင့်ရှောက်မယ့်ဒါဒါဆထဲမှာဘုရားသခင်ကိုထား. သငျသညျမှာထိုင်လို့မရဘူး2စားပွဲခမညျးတျောသို့မဟုတ်သင်ပြိုလဲ၏စားပွဲ၌ထိုင်လျှင်သင်တစ်ခုခုကိုစားပွဲ၌ထိုင်. သင်တစ်ဦးပန်ကာကိုဆုံးရှုံးပြီးပြီဖြစ်စေလမ်း. ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်စည်းကမ်းချက်များကိုလာလေးစားမှု shared လေးစားမှုနဲ့အလုပ်လုပ်အတူတကွသို့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းတွေ့နိုင်ပါသည်မျှော်လင့်ပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်ရောက်ခဲ့ coulda အကယ်., ထို့နောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်သင်၏အသက်တာရွေးချယ်မှုအားပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်.
Jon • သြဂုတ်လ 17, 2015 တွင် 12:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သူကညာရဲများကဆန့်ကျင်မဟုတ်ပါဘူး? ငါမစဉ်းစားကြဘူး. ကျွန်မခရီးစဉ်ကိုချစ်နှင့်သူ၏နောက်လာမည့်အယ်လ်ဘမ်မှီတိုငျအောငျမစောင့်နိုင်, အခါတိုင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်း. ဂရိတ်သီချင်း.
ဖေါ်ပြ: 257 || ချစ်ခင်ရပါသောခရီးစဉ် Lee က, ငါကိုသင်တို့နားထောင်ကြလော့ – ချိုးဖဲ့မဂ္ဂဇင်း
Kianna • မေ 20, 2016 တွင် 4:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့်ကဒီသီခငျြးကိုနားထောငျခဲ့နှင့်သီချင်းစာသားအစွမ်းထက်များမှာ. “သင့်ရဲ့မြျှောလငျ့ခမှာအဘယ်မှာရှိရဲ့?” -ခရီးစဉ် Lee က. ငါအဲ့တာကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်!
အမှတ် • နိုဝင်ဘာလ 21, 2016 တွင် 6:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အားလုံးငါ့ညီအစ်ကိုတို့သလား, အစ်မတွေ, စိတ်ပျက်, နှင့်နာကျင်. ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး. ကျွန်မအနေနဲ့အမေရိကန်အတိုင်းဤ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကို. ဒါပေမယ့်ငါနားထောင်. ငါသည်သင်တို့၏နာကျင်မှုစကားကိုနားထောငျ.
အဆိုပါစကားလုံးမှထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်သူမျှမဝေဖန်, အချစ်တစ်ခုတည်း.
Agen ပေါက် • မတ်လ 23, 2018 တွင် 7:02 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မင်္ဂလာပါ! ငါသည်ဤကြင်နာ Off-ခေါင်းစဉ်သည်ကိုသိပေမယ့်ငါ
အလုပ်? ငါသည်ငါ့ဒိုင်ယာရီထဲမှာရေးလုပျသို့သော်နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ blogging ဖို့လုံးဝသစ်ကိုဖြစ်ကြောင်းကို.